February 23 at 5:10am ·
Adobe After Effect CC 2018 full version လေးပါ
RAR file passward >>> www . p30download . com ရိုက်ပါ
Crack file ဒေါင်းရန် >>>
Posted by dawallay lay at 5:27:00 AM No comments:
Continuum Title Studio v11.0.2 for OFX x64 full version ပါ
RAR passward >>> www . p30download . com ရိုက်ပါ
ဒေါင်းရန် >>> 140 MB
Crack file >>>
1. Install the software and select "Complete installation without enteringaLicense" during the installation process.
2. Copy the BCC_OFX_3DObjects.ofx file in the Crack folder to the following path.
C: \_ Program Files \_ Common Files \_ OFX \_ Plugins \_ BCC_OFX_3DObjects.ofx.bundle \_ Content \_ Win64
3. Copy two other files in the Crack folder to the following path.
C: \_ Program Files \_ BorisFX \_ ContinuumOFX \_ 11 \_ lib
Posted by dawallay lay at 5:24:00 AM No comments:
Microsoft .NET framework လိုအပ်သူများအတွက် offline installer version အစုံ
Posted by THOMAS PHILIP
.net Framework က Developer တွေ အတော်များများအသုံးဝင်ကြပါတယ်
အချို့ဆော့ဝဲတွေက .net framework မရှိရင် အလုပ်မလုပ်ကြပါဘူး
ဒါပေမယ့် .net framework ကို ဒေါင်းလိုက်ရင် အများအားဖြင့်
အွန်လိုင်းရှိမှသာ install complete ဖြစ်တယ် အခုတင်ပေးလိုက်တာကတော့
offline installer ပါ ဒေါင်းပြီးရင် အင်တာနက်ရှိဖို့မလိုပဲ
installလုပ်နိုင်တယ် အောက်မှာ version အစုံတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
.NET Framework 3.5 SetupService Pack 1
Posted by dawallay lay at 11:04:00 PM No comments:
Excel 2013 ကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနည်း စာအုပ် မြန်မာလို ( အသစ် * New * )
မင်္ဂလာပါ ကျနော် Myanmar IT Helper ဖြစ်ပါတယ်ခင်မျ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် မန္တလေးက အလက်ထရောနစ် ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ အလုပ်ဝင်တယ်။
သူ့အလုပ်ကတော့ စာရင်းဇယား ကိစ္စပေါ့ဗျာ၊ Excel ကို Basic မှာတုန်းကတော့ သင်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်
Advanced level တွေ ဘာတွေ တက်ဖို့ အချိန်မမှီခဲ့တော့ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်အသုံးမပြုတတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။
လုပ်ငန်းခွင်ရောက်ပြီး Excel ကို ကိုင်ရတော့ အခက်တွေ့တာပေါ့။
ဒီတော့ ဒီလိုမျိုး အချိန်မရသူတို့အတွက် စာအုပ်လေးဖတ်ပြီး Excel ကို ကျွမ်းကျင်အဆင့် တက်လှမ်းနိုင်
ကြစေဖို့ Excel 2013 အသုံးပြုနည်းစာအုပ်ကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ထဲမှာ ခေါင်းစဉ်အခွဲပေါင်း
၄၀ကျော်၊ စာမျက်နှာပေါင်း ၇၀ နီးပါး ပါဝင်ပါတယ်။ ကဲ... Myanmar IT Helper ကနေ အသစ်ထပ်မံတင်
ဆက်လိုက်ပြန်ပါပြီခင်မျာ... :) နည်းပညာစာအုပ် အသစ်တွေအများကြီး ၀ယ်ထားပါတယ်..တစ်ခုချင်းစီကို
တင်ပေးသွားမှာပါ ဒါကြောင့် စောင့်မျှော်လို့အားပေးကြပါဦးလို့...
Posted by dawallay lay at 10:56:00 PM No comments:
How to see local IP address and network map in network computers, setting up network using Network Magic
11:37 AM winhtuttin No comments
...မိမိ Computer ၏ Local IP address (ကျွန်တော်၏ Blog ရှိ GeoUser IP မဟုတ်ပါ) သိနိုင်ရန်အတွက် cmd မှ ipconfig ရိုက်ထည့်လျှင် IP address ကိုမြင်နိုင်ပါသည်။ ထို IP address သည် Dynamic IP address ဖြစ်ပြီ: များသောအားဖြင့် IP address ကို Automatic ရရန် Setup လုပ်ထားလေ့ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်း IP address သည် ပြောင်းလဲမှုရှိသည်။ ထို IP address ကို Network Properties ထဲဝင်၍ Fix လုပ်ထား၍လဲ ရသည်။ ထိုကဲ့သို့ လုပ်ထားလျှင် အိမ်တွင်း၊ ရုံးတွင်းသုံး နေရာပြောင်းလဲမှု မရှိသော Destop Computers များအတွက် သိပ်ပြဿနာမရှိပေမဲ့ သွားလေရာယူသွားနိုင်ပြီး Free wireless internet သုံးနိုင်သော Laptops များအတွက် အခက်အခဲရှိပါသည်။ IP address ကို Setup လုပ်တတ်သူများ အတွက် Network properties ထဲဝင်ပြီးပြောင်းလဲပေး၍ရပါသည်။ Setup မလုပ်တတ်သူများအတွက် အဆင်မပြေပါ။ ထို့ကြောင့် များသောအားဖြင့် ၎င်း IP address ကို Automatic ချိန်ထားတတ်ပါသည်။ အောက်ပါပုံသည် မိမိ Computer ၏ IP address ကို cmd prompt မှ ကြည့်သောပုံဖြစ်ပါသည်။...
...သို့သော် တစ်ခြားမိမိ Computer နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော Network Computers များ၏ IP address များကို မိမိ၏ Computer မှ မည်ကဲ့သို့ ကြည့်မြင်နိုင်သနည်း။ ထိုအတွက် Network Software များသုံးကြပါသည်။ ထိုအထဲမှ ကျွန်တော် သုံးနေသော Network Magic Software ကိုဖော်ပြ ပေးထားပါသည်။ Network Magic သည် IP address ကြည့်ရုံသာမကပဲ Computer တစ်လုံးစီ၌ တစ်မျိုးစီသာရှိသော MAC address ကြည့်နိုင်ခြင်း ၊ Network Map, Network History စသည်တို့ကိုပါ ကြည့်၍ရပြီး Network Setup, Wireless WEP,WPA Setup စသည်များကိုပါ လုပ်နိုင်ပါသည်။...
...၎င်းသည် Trial Version ဖြစ်သော်လည်း Some feature မှလွဲပြီး ဆက်အသုံးပြု ၍ရပါသည်။ Install လုပ်ချိန်တွင် Internet,Router များကို ဖွင့်ထားရပါမည်။
...Software အသုံးပြုပုံမှာ ကြည့်ရုံပဲဖြစ်၍ မခက်ခဲပါ။ အပေါ်မှပုံ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိပ်ဖက်၌ Network Tasks, Network Map, Shared Folder, Status Center, Network Advisor ရှိပြီး Network Map ကိုသွားလျှင် အထက်ပါပုံအတိုင်းမြင်ရပါမည်။ မိမိ Computer နှင့် ဆက်သွယ်ထားသော Router, Computers, Shared Printer စသည်များကို Online, Offline စသည်ဖြင့်တွေ့ရပါမည်။ ထို့အပြင် မိမိ Network အတွင်းသို့ ပြင်ပမှ Wireless Computer တစ်လုံး Connect လာလုပ်လျင်လည်း Intruder အဖြစ်မြင်ရမည်ဖြစ်သည်။ Network Map ပေါ်ရှိ မိမိသိချင်သော Online ဖြစ်နေသည့် Computer ပေါ်ကို Click လုပ်ပြီး ညာဘက် Panel တွင် Tasks, Details, Alerts သုံးခုထဲမှ Details ကို Click လုပ်လျင် မိမိသိချင်သော IP address,MAC address များကို အောက်ပါပုံအတိုင်း တွေ့မြင်ရပါမည်။
...Router ၏ IP address ကိုလည်း ၎င်းအတိုင်း ကြည့်လျင် အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရမည်။
...တခြား Computer များတွင် Network Magic ကို Install မလုပ်လိုပါက Hide Alerts လုပ်ထားနိုင်ပါသည်။
...ထို့အပြင် Network Magic Window ၏ Status Center ၌ Wireless Security WEP,WAP Setup ပိုင်းကိုလဲ အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရပြီး Setup လုပ်နိုင်ပါသည်။
...ဒါတွေကတော့ Network Magic နှင့် IP address, MAC address,Network Map ကြည့်နည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် မိမိ Computer မှတစ်ခြား Network Computers များအား ကြည့်မြင်ရမည့်နည်းကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေး သွားပါမည်။...
Posted by dawallay lay at 5:09:00 PM No comments:
Latest Softwares & Computer Technology Sharing http://winhtuttin.blogspot.com
Blog မှာကြော်ငြာများကို Slide Show နဲ့ဖေါ်ပြချင်သူများအတွက်
Disk Clean softwares
hardisk eraser tool
Internet Errors များ
Local area network connection2 error
Mobile phone website များ
Network error များ
WiMax Internet လိုင်းများ၏အခက်အခဲတစ်ခု
Y talk ဖုန်းခေါ်ဆိုခများ
Android mobile phone drivers
9:12 AM winhtuttin No comments
ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ Driver အခက်အခဲ့ဖြစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ပါ ရှာတွေ့သလောက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Sony Phone Drivers
Posted in: Driver,Mobile phone drivers Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
Posted by dawallay lay at 4:54:00 PM No comments:
‎အောင်သူရဝင်း‎ to ကွန်ပြုတာဆိုင်ရာ မေးမြန်းနိုင်သောဂရု
January 29 at 6:33pm · Mandalay, Myanmar ·
USB Stick နဲ့ ဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲ 👨‍💻
ကွန်ပျူတာနဲ့ အလုပ်လုပ်နေရသူတော်တော်များများ USB Memory Stick ကို
မသုံးဖူးတဲ့သူ မရှိလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ User တွေကျတော့ USB Stickနဲ့ 
ဖိုင်တွေကူးဖို့ ၊သိမ်းဖို့ ၊ Windows တင်တာ စသည်ဖြင့် USB Memory Stick ရဲ့ 
အသုံးဝင်နည်းလမ်း အနည်းကျဉ်းလောက်ပဲ သိကြမှာပါ။ အဲ့ဒါကြောင့် မသိသေးတဲ့
သူတွေအတွက် USB Memory Stick လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အသုံးဝင်နည်းလမ်းတွေကို
ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘာတွေလုပ်နိုင်တယ်လို့ ပဲ ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။
တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အသုံးပြုနည်းတွေကို သိချင်ရင်တော့ နောက်မှပြန်ရေးတင်ပါမယ်။
1. သင့်ကွန်ပျူတာကို USB Stick နဲ့ အပိတ်၊အဖွင့်လုပ်နိုင်တယ်။
PREDATOR ဆော့ဝဲလ်တစ်ခုကို မိမိစက်မှာအရင် Install လုပ်ထားပြီး
သင့်ကွန်ပျူတာကို Lock ချတာ၊ ပြန်ဖွင့်တာတွေ လုပ်နိုင်တယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်က
မိမိကွန်ပျူတာ Password မသိပဲ ခန့် မှန်းပြီး လျှောက်ရိုက်ထည့်တဲ့ Password သို့ မဟုတ်၊ Top-Secret Password တွေနဲ့ ဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားလာရင် "ACCESS DENIED" ဆိုတဲ့
စာသားတက်လာပါလိမ့်မယ်။ မိမိကွန်ပျူတာကို အသုံးမပြုတဲ့အချိန်မှာ USB Stick ကို
ထုတ်ထားလိုက်ရင် စက်က အမဲရောင် Screen ဖြစ်သွားပြီး Lock ကျသွားမှာပါ။
ပြန်သုံးချင်တဲ့အချိန် Stick ကို ပြန်ထိုးလိုက်ရင် Password ရိုက်ထည့်စရာမလိုပဲ
2.Wireless Networks တွေကို အလွယ်တကူချိတ်ဆက်နိုင်တယ်။
Windows OS တွေမှာ မိမိလက်ရှိသုံးနေတဲ့ Wifi name,Password နဲ့ တစ်ခြား
Information တွေကို USB Stick မှာ ကူးပြီး သိမ်းထားနိုင်တဲ့ Features တွေ
ပါဝင်ပါတယ်။ မိမိစက်ထဲက Wifi name, Password နဲ့ Network နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့
အချက်လက်တွေကို USB Stick ထဲ ထည့်သိမ်း။ ပြီးရင် တစ်ခြားစက်တစ်လုံးမှာ
ထိုးထည့်ပြီး Network ကို Password ထည့်စရာမလိုပဲ အလွယ်တကူချိတ်ဆက်နိုင်မယ်။
3.ReadyBoost လုပ်သုံးပြီး ကွန်ပျူတာကို မြန်ဆန်စွာအသုံးပြုနိုင်တယ်။
သင့်ကွန်ပျူတာမှာ Harddrive တွေလည်းအလုပ်လုပ်နှေးနေတယ်ဆိုရင်
ReadyBoost လုပ်ပြီး မြန်ဆန်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ReadyBoost လုပ်ထားခြင်းက
Harddrive ရဲ့Cache အဖြစ် အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Harddrive Cache ဆိုတာက
ဖိုင်တွေ တော်တေ်ာများများကို အကြိမ်နှုန်းများစွား အသုံးပြုနေတာလို့ အလွယ်နည်း
မှတ်ထားလိုက်ပါ။ Cache တွေက Harddrive ထက် USB Stickကို
ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ဖတ်ရင် Windows OS ကလည်း USB Stick ပေါ်မှာရှိတဲ့
Cache တွေထံက Files တွေကို ပိုဖတ်နိုင်မယ်။ ဒါပေမယ့် SSD ဆိုရင်တော့
Cache က SSD ထက် နှေးကွေးတာကြောင့် ReadyBoost ကို သုံးလို့ မရနိုင်ပါဘူး။
4.Portable Web Server ထည့်ထားနိုင်တယ်။ သင်က Website တွေ
ရေးသားနေတဲ့ Web Developer ဆိုရင်တော့ Server2Go ကို USB Stick မှာ
ထည့်ထားပြီး Portable Web Server အဖြစ် သုံးနိုင်ပါတယ်။ Server2Go ထဲမှာ
WAMPP Server Stack ပါဝင်တာကြောင့် Apache, MySQL, PHP, and
Perl တွေလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သွားလေရာနေရာတိုင်းကို Server စက်ကြီး
သယ်နေစရာမလိုပဲ Stick ကို တစ်ခြားကွန်ပျူတာထဲမှာ ထိုးထည့်ရုံနဲ့ 
မိမိ Web Server ကို အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
5. Apps,Games နဲ့ အသုံးဝင် ဆော့ဝဲလ်တွေကို Portable အဖြစ်
Stick မှာ ထည့်ထားပြီးသုံးနိုင်တယ်။ မိမိစက်က ဆော့ဝဲလ်တွေ
ထည့်ထားတာများနေရင်၊ နောက်ထပ် Install လုပ်ဖို့ စက်မနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်
USB Stick မှာ Portable လုပ်ထားပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းကို
6. Operation System တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ထားနိုင်တယ်။ မိမိ Stick မှာ
တစ်ခြား OS တင်ထားပြီး လက်ရှိသုံးနေတဲ့ OS နဲ့ အလည့်ကျ အသုံးပြုလို့ ရတယ်။
ဥပမာ-အခုသုံးနေတာ Windows OS ဆိုရင် USB Stick မှာ တစ်ခြား
OS Linux တစ်ခု တင်၊ BIOS မှာ USB Stick နဲ့ Boot တက်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာတစ်လုံးတည်းမှာ Dual Boot လို Partition တစ်ခုစီမှာ OS တင်တာ
မဟုတ်ပဲ OS နှစ်ခုကို အလည့်ကျ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
7. နောက်ထပ် အသုံးဝင်နည်းလမ်းတွေ များစွာရှိပါသေးတယ်။
Third-Party Software တွေနဲ့ ပေါင်းပြီး အသုံးပြုလို့ ရတဲ့နည်းတွေလည်း
ရှိပါသေးတယ်။ USB Stick လေး ထိုးလိုက်တာနဲ့ ကွန်ပျူတာတစ်ခုလုံး
ဘာမှ လုပ်မရဖြစ်သွားအောင် လုပ်တဲ့နည်းတွေလည်းရှိပါတယ်။
မကောင်းမှုတွေကို အားမပေးတာရယ်၊ဖော်ပြလိုက်ရင် အန္တရာယ်ရှိနိုင်တာရယ်၊
စာရှည်ရင် ဘယ်သူမှ မဖတ်ကြတော့တာရယ်ကြောင့် မရေးတော့ပါဘူး။
အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့နည်းလမ်းတွေထဲက လိုအပ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကိုသာ
ဖော်ပြပေးပါမယ်။ မိမိသိချင်တာကို Comment မှာ ရေးထားခဲ့ပါ။
နောက်နေ့ တွေမှာ အသုံးပြုနည်းတွေကို ပြန်ရေးတင်ပေးပါမယ်။
Posted by dawallay lay at 5:25:00 PM No comments:
‎အောင်သူရဝင်း‎ to ကွန်ပြုတာဆိုင်ရာ မေးမြန်းနိုင်ေ...
Win Htut TinLatest Softwares & Computer Technology...
How to see local IP address and network map in net...
Microsoft .NET framework လိုအပ်သူများအတွက် offli...
Continuum Title Studio v11.0.2 for OFX x64 full ve...
တမာသားလေး၊ မတ္တရာFebruary 23 at 5:10am · Adobe Afte...